Iintsingiselo ezilishumi zeKhadi leTarot Tarts | Ukufundwa kweTarot - Iintsingiselo Zekhadi Letarot
Iintsingiselo ezilishumi zeKhadi leTarot Tarts
Ishumi leenkemba iTarot Uluhlu lwesiqulatho
Iikrele ezilishumi zilungile
Iikrele ezilishumi zabuya
Ukubonakaliswa kwamanani kwiShumi leeNkemba
Buyela kwiSuit of Swords
Ukuba unakho ukuyeka izinto ezingafanelekanga ukubambelela kuzo ngoku, ungabona ukuba likamva lakho eliqaqambileyo ngokwenene.
Isihloko seKabbalistic seShumi leKhadi leTarot, INkosi yeNtshabalalo , uxelela kuphela isiqingatha sebali.
Kulungile, kukho indoda eyophayo emhlabeni, kwaye amakrele alishumi abambeke emqolo.
Hayi, oko akubonakali kuhle.
Kodwa jonga isandla sakhe kwiishumi zeKrele. Yenza umqondiso wentsikelelo.
Yintsikelelo leyo. Abantu ababukeleyo banokucinga ukuba woyisiwe, kodwa ufumene uloyiso lokomoya.
Konke kungumfuziselo. Jonga, oosokhemesti babhala ngezinto ezinje nge 'Ngonyama eluhlaza' ngalo lonke ixesha, kodwa oko akuthethi ukuba bathatha amabhakethi epeyinti eluhlaza ukuya kumyezo wezilwanyana!
Inkqubo ye- ngeenkwenkwezi imbalelwano, Ilanga kwi IGemini , ikunika umkhondo obalulekileyo: Apha ubukrelekrele bohlukanise 'ubuqili kubuninzi,' njengoko i-Emerald yeCwecwe likaHermes Trismegistus isitsho.
Ikwahlule izinto ezincinci, ezingabalulekanga kwezona zinto zibalulekileyo ebomini.
Iyabonwa njengentshabalalo kuba abantu abaninzi bayarhabaxa ngaphezulu kwezinto ezingabalulekanga.
Indoda ekwishumi leelikrele ilele phantsi ayisazikhathazi ngezi zinto kwakhona.
Ujonge oko kugqibeleleyo Luhlaza amanzi, acace gca nangoku.
Uhambo lwakhe olulandelayo, lokomoya luyakumhambisa ngaphaya kwoluhlu lwe Luhlaza iintaba, iindawo eziphakamileyo zokomoya ezintsha. Indoda kwiiShumi eziShumi iyabona Igolide isibhakabhaka kusasa sagxotha ezo Mnyama amafu okuphelelwa lithemba.
Amakrele amhlabayo aphumle kwiShumi leeNkemba. Ezintandathu zidlula Inethi I-drape egubungele umzimba wakhe wasezantsi, ebonisa ukuba ulwazile umdla wakhe. Abane bangcwatywa ntsundu Ingubo kumzimba wakhe ongaphezulu, okuthetha ukuba akasazikhathazi ngezinto eziphathekayo.
Nakuphi na ukulahleka kwekhadi leShumi leeKrele lisenokucebisa ukuba alikho likhulu njengoko usenza kuba, masijongane nayo, kuthatha ikrele elinye ukubulala ishumi ke, kulungile, ngaphezulu.
Ngapha koko, nokuba yeyiphi na 'elahlekileyo' inokuba ikhutshiwe ngaphandle kwendlela ukuze ubone iingcango ezivulekileyo ezikhokelela kwizinto ezingcono kakhulu.
Ukuma okuLishumi kweekrele zeTarot kwiintsingiselo
Khumbula i Isuti yeeNkemba malunga nobukrelekrele kunye nengcinga enengqiqo ke sebenzisa ingqondo yakho ebukhali ukujonga imeko yangoku njengoko injalo.
Ukuphilisa kunye nenkqubela phambili kuya kuza ngokwamkela inyaniso. Ukuza nokucaca kunye nobulumko bokwenza izigqibo ezifanelekileyo.
Kulungile, umntu omthembileyo uye wakugwaza emqolo. Ikhadi leshumi leenkemba elibonisa ukuba uyekile ukukhala, 'Kutheni?'
Awuyi kuvumela ukuba iphinde yenzeke.
Imeko enganyamezelekiyo, enjengobudlelwane neqabane elingathembekanga, iphelile. Ewe kubuhlungu. Kodwa ngoku ubona loo mntu ukuba ungubani kanye kanye.
Ngaphaya koko, la mava akwenze walumka ngokwaneleyo ukuba ungazibona ezo flegi zibomvu kwangoko. Oko kuyakukugcina ungazifaki kwakule ngxaki kwakhona.
Xa ubuyile ngeenyawo, uyakube ucula kanye kunye noRoger Daultry xa loo ngoma idlala kunomathotholo.
'Asisayi kuphinda sikhohliswe kwakhona!'
Ukuhlalutya imeko yakho ngokusondeleyo, unokubona ukuba izinto aziphantse zibe mbi njengoko uzenzayo. Nje ukuba uyeke ukwenzakala, uyakuqonda ukuba kucacile ukuhamba ngolwandle ukusuka apha ukuya phambili.
Siyavuyisana nawe, uluphumelele uvavanyo lwakho lokugqibela.
Ewe, ububila ngenxa yezo mviwo zokugqibela, kodwa awunguye uhlobo lomntu oza kuchitha lonke ixesha lasehlotyeni ekhalaza ngendlela ebebunzima ngayo.
Sele upakisha iibhegi zakho zohambo oluya eCancun. Yiba nexesha elimnandi kwaye ungalibali i-sunscreen!
Olunye utoliko lweShumi leShumi lekhadi le-tarot licebisa ukuba iimeko ezingalindelekanga zinokulungisa izicwangciso zakho. Qengqeleka ngeembethi, uzisuse uthuli, kwaye ubuyele eringini.
Ngamanye amaxesha, izinto ziyenzeka nje, kwaye akukho nto unokuyenza ngayo.
Iikota ezilishumi zeTarot zikwalatha kwinqanaba elibalulekileyo kuphuhliso lwakho lokomoya.
Amava akho akufundise enye indlela ozijonga ngayo kunye nendalo iphela. Iimpendulo kwimibuzo ebalulekileyo azisekho kwiingcinga kuwe.
Engqondweni yakho, akusekho kuthandabuza, nokuba bukhona okanye bukhona ubomi emva kokufa, nokuba kukho uthixo okanye hayi.
Iintsingiselo ezilishumi zeKhadi eziTshintshiweyo zeKhadi
Xa kubuyiselwa umva, ikhadi elishumi leTarot Tarot lifana nokugqibela kokugqibela ngaphambi kokuba kungenzeki.
Okwangoku kwekhadi elithe tye alinakumiswa ngokwenene. Kukho iziphelo ezibuhlungu endleleni kodwa kulungile, kuba xa into ingaphezulu kwento ekuphela kwayo ekufuneka yenziwe kukufunda kwixa elidlulileyo kwaye uqhubeke.
Kule nto, ishumi leenkemba eziguqulweyo zizisa ukucaca kunye nokuqonda okungcono ikamva lakho lokwenyani.
Ngaba woyika utshintsho okanye uyalwamkela?
Uloyiko lunokukugcina ekwenzeni inkqubela phambili ebalulekileyo kuphuhliso lwakho lobuqu okanye lokomoya. Abantu abachacha ngokuxhomekeka kwimichiza bahlala bexhalabile ngokushiya ukusela kwabo nokusebenzisa abahlobo ngasemva.
Ewe, eso sisigqibo esinzima.
Kodwa ngamanye amaxesha kuphela kwendlela yokukhetha esempilweni onayo.
Ngamanye amaxesha, ikhadi leshumi leTarot Tarot likwazisa ukubethwa ngumoya kwemali. Akunakwanela ukuthatha umhlala phantsi, ke kuya kufuneka uyisebenzise ngobulumko loo mali.
Mhlawumbi utsale umdla womntu onamandla, kwaye yena ujonge kuwe. Kodwa ukuba ufuna ukuyenza ihlale ihleli, kuya kufuneka uyisebenzele.
Ngokufanayo, ukufudukela kwenye indawo yelizwe kunokwenza ezinye iingxaki ohlangabezana nazo apha zihambe okwethutyana.
Kodwa ngaphandle kokuba usebenzise eli thuba ukwenza utshintsho olusisigxina, iingxaki zakho ziya kukufumana ekugqibeleni-naphi na apho ukhoyo.
Kwelinye icala, ukuba uzimisele ukuvumela umjikelo ohamba kuwo uqhubeke ikhosi, izinto ziya kude ziphume ekugqibeleni. Uya kuba nakho ukubona umfanekiso omkhulu-kunye nendawo yakho kuyo.
Amathuba kukuba, uya kufumanisa ukuba akukubi kangako, emva kwayo yonke loo nto.
Nokuba abanye bakwenzakalise kangakanani na, kukho inxenye enzulu ngaphakathi kubo abangakhange bakwazi ukuyichukumisa.
Njengokuthandabuza okungathandabuzekiyo kunika indlela yokuqonda okutsha, ekugqibeleni uyakuziva unamandla okuphila. Yiba nomonde kwaye izinto ziya kuphucula kuzo zonke iinkalo ekuhambeni kwexesha.
I-capricorn yabasetyhini kunye ne-scorpio yokuhambelana kwendoda
Ishumi leeNkcukacha zeTarot Card yokuNxibelelana kweMetaphysical:
Isiqalelo : Umoya
Iimpawu zeZodiac : IGemini
Ukuphilisa Amakristali : Cima iQuartz
Ishumi leKhadi leNkemba kunye neTarot Numerology
Amashumi abonisa ukugqitywa komjikelo omnye kunye nokuqala komtsha kuwo omabini, i-Kabbalistic kunye nenani lemveli. Apha, inkqubo yohlalutyo lwengqondo iqhubekile ikhosi yayo yonke. Intsingiselo yayo yonke into incitshisiwe yaya kwi-zero. Kodwa ekubeni into ethile-okanye umntu-kufuneka ayenze ukunciphisa, ke uhambo olutsha lokubuza ngokomoya luza kuqala.
pisces umfazi kunye nendoda taurus ebhedini
lubonakala njani uphawu lwe-virgo zodiac
Ngaba ii-capricorn ziyahambelana nezinye ii-capricorn